FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PEKEPOO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pekepoo
Alika mitambatra Pekingese / Poodle mifangaro
Guido the Peek-a-poo amin'ny faha-3 taonany
Poo sy Poo
Ny alika Peek-a-poo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pekingese ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Peekapoo
Registra ny famolavolana mpamorona = Peke a Poo
'Ity ny alikako, fifangaroana Pekingese sy Poodle. Gizmo no anarany ary 8 taona amin'ity sary ity izy. Tiako ho fohy ny volony ka mankany amin'ilay mpanao volo iray ihany izy (hatramin'ny naha zazakely azy) isaky ny 4 herinandro amin'ny volana fahavaratra sy 6 herinandro amin'ny volana ririnina. Fony mbola tanora tany izy, dia novakian'ny zanakavavin'ny taovolo volo boky izy rehefa nivoaka avy tany am-pianarana mba hitazomana azy tsy hitoloko mandra-panaoko azy. Zanaky ny renim-pianakaviana izy! Manaraka ahy na aiza na aiza izy. Tezitra aminy ny fianakaviako (ary koa ny hafa) satria hiteny zavatra aminy izy ireo na hanery azy hanao zavatra ary tsy ekeny na tsy hitany akory ny fombany tsy misy. Rehefa entiko mandeha an-tongotra izy (izay fantany fa handeha izy rehefa miteny ny teny aho) dia mila mihantona amin'ny faran'ny vavany izy. Fantatrao foana rehefa reraka izy satria lasa matory izy — na ny trano fiandrasana ao an-tranon'ny fianakaviana na ao amin'ny fandriany ao amin'ny efitranoko. Indraindray dia heveriko fa saka saka izy satria rehefa manao dia lavitra izahay dia mananika ny vozoko ary mandry eo anelanelan'ny hatoko sy ny seza. Izy no alika tsara indrindra. Samy maniry azy daholo ny olona. Entiko miasa izy ary mijanona eo anilako izy. Mijanona ao amin'ny biraoko izy mandra-pivoakako ary hanaraka ahy amin'izay alehako izy, toy ny lakaoly ihany. Na izany aza, isaky ny mitondra azy amin'ny olona aho dia milaza amiko foana fa mila braces izy noho ny manaikitra ambany azy. Nolazaiko azy ireo fa izany no nahazoany zazavavy. Na aiza na aiza no itondrako azy dia manolotra vola ahy ny olona hividy azy. Tsara toetra izy. Nentiko tany amin'ny tsenambarotra izy naka ny sariny niaraka tamin'i Santa Claus ary niafara tamin'ny pejy voalohany tamin'ny Lansing State Journal izy. Tiany ny maka ny sariny. '
'Sambatra ity rehefa azontsika izy ... Noheveriko fa alika volontany marevaka izy.'
'Vintana ity aorian'ny fandroana ROA sy ny fiharatana farany amin'ny mpihazakazaka, mba hialana amin'ny loto, parasy ary volo matotra. Izy dia nivadika ho alika fotsy mahafatifaty! '
Tobey the Peek-a-poo amin'ny 1 ½ taona
Queenie the Peek-a-Poo amin'ny faha-2 taonany— 'Milalao izy, tia azy ary mitazona ny kalesy aristokratika sy ny fandokoana ny ray aman-dreniny Pekingese. Efa manana sary Peek-a-Poos maro ianao, fa araka ny hitanao amin'ny sarin'i Queenie dia samy hafa iray amin'ny tombony azo amin'ny hybrid izy rehetra. Nihalehibe tamina trano manokana tany Denver, CO izy. '
Koby ilay Pekeapoo
'Ity no Pekepoo, 10 taona, Maggie antsika. Nanafaka azy ny reniko tamin'izy mbola kely. Nandeha tany amin'ny an'ny rahalahiko i Maggie taorian'ny nahafatesan'ny reniko. Taty aoriana, taorian'ny nahafatesan'ny zaobaviko dia nitotongana ny rahalahiko (nanana 4 izy Poodles ary Maggie) nentiko nody aho. Sipa fatratra izy, tena maotina mihitsy, tia ny zafikeliko. Tsy mbola naneho herisetra tamin'iza tamin'iza izy. Mety amin'ny alika hafa ve ny habeny ary na ny antsika aza Lab / mpiandry afangaro sy ny naman'ny be Golden Retriever . Izy dia manana mavesatra ambany-bitika nefa cutie toy izany. Ity sary ity dia nalaina raha mbola nitoby izahay izay tena tiany, ary nitsambikina tamin'ny fotoana nandehanana nandeha fiara. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Peek-a-poo
Sary peek-a-poo 1
Sary peek-a-poo 2
Sary peek-a-poo 3
kemmer cur vs cur
Husky siberianina 2 taona
lab shar pei afangaro alika kely